आज सनिबार शनिदेवको पुजा कसरि गर्ने र कस्तो लाभ प्राप्त हुन्छ ? – च्यालेन्ज नेपाल
आज सनिबार शनिदेवको पुजा कसरि गर्ने र कस्तो लाभ प्राप्त हुन्छ ?
मानिसको भाग्य कतिबेला बदलिन्छ पत्तै हुँदैन । मानिसहरु रातारात क’रोड पछि हुन्छन् । हिन्दीमा एउटा चर्चित उखान छ ‘उपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड के देता है’ अर्थात भगवानले दिए भने घरको छानो फु’टाएरै दिन्छन् । यस्तै भएको छ इण्डोनेसियाका एक युवकसँग । भगवानले उनलाई यति धेरै धन दिए जसको उनले कल्पना पनि गरेका थिएनन् । र, सबैभन्दा रोचक त उनलाई भगवानले यति धेरै धन उनको घरको छानो फु’टाएरै दिए । बीबीसी इण्डोनेसियाको रिपोर्ट अनुसार जोसुआ हुतागालुङ नामका ३४ वर्षका ती युवकलाई बेलायती मिडियाले फोन गरेर ‘नयाँ करोडपति’ भन्दा उनी चकित परे । खासमा गएको अगष्ट महिनामा उनको घरमा आकाशबाट एउटा ढुंगो खसेको थियो । त्यो ढुंगो उनको घरको छानो फु’टाउँदै खसेको थियो। अहिले त्यो ढुंगाको मूल्य एक अनलाइन प्लेटफर्ममा प्रतिग्राम ७५७ पाउण्ड परेको छ । त्यो ढुंगो १ किलो ८०० ग्रामको छ जसको मूल्य १.४ मिलियन पाउण्ड (२० करोड नेपाली रुपैयाँ भन्दा बढी) पर्न जान्छ । जोसुआ मानिसको ला,श राख्ने काठको क’फिन बनाउने व्यक्ति हुन। उनले त्यो ढुंगा २० करोड इण्डोनेसियन रुपीमा बेचेको उत्तरी सुमात्राका एक पत्रकार देदी हेर्मावानलाई बताएका थिए जसले बुधबार बीबीसी इण्डोनेसियालाई यसको जानकारी दिएका थिए । उन ले त्यो ढुंगा सुमात्रामा बस्दै आएका अमेरिकी नागरिक जारेड कोलिन्सलाई १७ अगष्टमा बेचेको पनि बताएका थिए । जोसुआले ढुंगाको मूल्य २०० मिलियन रुपी र ढुंगाले भ’त्काएको घर मर्मत गर्न १४ मिलियन रुपी गरी २१४ मिलियन रुपी पाएको बताएका थिए । उनले यो रकम लिएको प्रमाण दिन भने अस्वीकार गरे । जोसु आमा अनुसार उनले आफ्नो घरमा खसेको सबै ढुंगा बेचेका छैनन् । उनले कोलिन्सलाई १ किलो ८०० ग्राम बेचे तर उनको घरमा खसेको ढुंगाको तौल २ किलो २०० ग्राम थियो ।
हिन्दु धर्ममा विश्वास राख्ने हिन्दुहरुले हप्ताको सातै दिन फरक फरक भगवानको पूजा गर्ने चलन रहेको छ । विशेष व्रत उपवास बाहेक हप्ताको कुनै एक दिन बार अनुसार कुन भगवानलाई पुजिन्छ । त्यो भगवानको लागि व्रत बसेर पूजा गर्ने गर्छन् ।त्यस्तै आज (शनिबार) शनिदेवको देष्टि नपरोस् भनेर शनिदेवको पूजा गर्ने चलन रहेको छ । यो दिन व्रतालुहरुले कालो वस्त्र लगाउनुपर्छ । रात्री भोजमा नुन खानुहुँदैन् ।मूर्ति रूप मा गर्नु हुदैन शनिको पुजा:शनि देवको पुजा गर्दा एउटा कुराको ध्यान राख्नु जरुरि छ, शनिदेवलाई आफ्नो मूर्ति को समक्ष पूजा गरेको मन पर्दैन । त्यसैले शनि को आराधना सदैव त्यो मंदिरमा मात्र गर्नुपर्दछ जहा शनिदेव शिला रूपमा विराजमान हुन। यसको अलावा शनिदेव को आराधना उनको प्रतीक मानिने शमी या पीपल को वृक्षको पनि गर्नु पर्दछ । शनिदेव को पूजा शनिबार मात्र गर्नु पर्दछ।यसरी गरौ पूजा:शनिवार को पूजा गर्दा यो कुराको ध्यान राखौ। यस दिन पीपलको रुख को जरामा नै जल अर्पण गरौ। यसको साथै शनिदेवलाई प्रसन्न गर्नका लागि तोरीको तेल को दीपक जलाउ। शनि को पूजा गर्नु भन्दा पहिले आफ्नो आचरण स्वच्छ राख्नु पर्दछ। यसको अलावा शनिवारको दिन बेलुका गरीबलाई भोजन गराउदा सनिदेव प्रसन्न हुन्छन् र यसले पुण्य प्राप्त हुन्छ।
मानिसको भाग्य कतिबेला बदलिन्छ पत्तै हुँदैन । मानिसहरु रातारात क’रोड पछि हुन्छन् । हिन्दीमा एउटा चर्चित उखान छ ‘उपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड के देता है’ अर्थात भगवानले दिए भने घरको छानो फु’टाएरै दिन्छन् । यस्तै भएको छ इण्डोनेसियाका एक युवकसँग ।
भगवानले उनलाई यति धेरै धन दिए जसको उनले कल्पना पनि गरेका थिएनन् । र, सबैभन्दा रोचक त उनलाई भगवानले यति धेरै धन उनको घरको छानो फु’टाएरै दिए । बीबीसी इण्डोनेसियाको रिपोर्ट अनुसार जोसुआ हुतागालुङ नामका ३४ वर्षका ती युवकलाई बेलायती मिडियाले फोन गरेर ‘नयाँ करोडपति’ भन्दा उनी चकित परे ।खासमा गएको अगष्ट महिनामा उनको घरमा आकाशबाट एउटा ढुंगो खसेको थियो । त्यो ढुंगो उनको घरको छानो फु’टाउँदै खसेको थियो। अहिले त्यो ढुंगाको मूल्य एक अनलाइन प्लेटफर्ममा प्रतिग्राम ७५७ पाउण्ड परेको छ । त्यो ढुंगो १ किलो ८०० ग्रामको छ जसको मूल्य १.४ मिलियन पाउण्ड (२० करोड नेपाली रुपैयाँ भन्दा बढी) पर्न जान्छ ।जोसुआ मानिसको ला,श राख्ने काठको क’फिन बनाउने व्यक्ति हुन। उनले त्यो ढुंगा २० करोड इण्डोनेसियन रुपीमा बेचेको उत्तरी सुमात्राका एक पत्रकार देदी हेर्मावानलाई बताएका थिए जसले बुधबार बीबीसी इण्डोनेसियालाई यसको जानकारी दिएका थिए । उन ले त्यो ढुंगा सुमात्रामा बस्दै आएका अमेरिकी नागरिक जारेड कोलिन्सलाई १७ अगष्टमा बेचेको पनि बताएका थिए ।जोसुआले ढुंगाको मूल्य २०० मिलियन रुपी र ढुंगाले भ’त्काएको घर मर्मत गर्न १४ मिलियन रुपी गरी २१४ मिलियन रुपी पाएको बताएका थिए । उनले यो रकम लिएको प्रमाण दिन भने अस्वीकार गरे । जोसु आमा अनुसार उनले आफ्नो घरमा खसेको सबै ढुंगा बेचेका छैनन् । उनले कोलिन्सलाई १ किलो ८०० ग्राम बेचे तर उनको घरमा खसेको ढुंगाको तौल २ किलो २०० ग्राम थियो ।
Tags: Challenge nepal च्यालेन्ज अन्लाइन टिभी च्यालेन्ज नेपाल सनिको पुजा सनिबार कसरी पुजा गर्ने सनिबार बिशेष
Previous भोलिदेखि सार्वजनिक सवारीको जोर-बिजोर प्रणाली हट्ने
Next थप तीन ठाउँमा बिओपी स्थापना हुँदै हेर्नुहोस कुन कुन ठाउमा निर्माण हुने